Ogaden News Agency (ONA) – Siminaar ay ka soo qaybgaleen jaaliyada kala duwan oo ka furmay Copenhagen
Siminaar ay ka soo qaybgaleen jaaliyada kala duwan oo ka furmay Copenhagen
Waxaa maanta ooy taariikhdu tahay 03/04/2012 ka furmay caasimada wadanka Denmarka ee Copenhagen siminaar mudo dheer lasugayay oy wadajir u soo qaban qaabiyeen Jaaliyada Soomaalida Ogadenya iyo ururka OYSU ee wadanka Denmark.
Siminaarkan oy kasoo qayb galeen wufuud tiro badan oo ka socday jaaliyado ajinabi ah oo u dhashay wadamada Finland, Ireland, Jaaliyada Nigeria ee UK iyo jaaliyada looyahay martida tee Denmark ayaa maalintii koobaad ka furmay Dan Hotel- Copenhagen.
Siminaarka oo furmay 9 subxanimo ee wakhtiga Yurub, waxaa warbixin qoto-dheer oo meelo badan taabanaysa kufuray Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaalida Ogadenya ee wadanka Denmark, Mudane Xasan Mucalim. Wuxuu gudoomiyuhu ka warbixiyay guud ahaan halganka Soomaalida Ogadenya gaar ahaan waxqabadka Jaaliyada Denmark oo kamid ah ah jaaliyadaha safka hore kagajira halganka Ogadenya.
Waxaa kale oo iyana kahadashay furitaanka munaasabadan taariikhiga ah Mrs. Rusmusen, oo ka socotay ururka European Union (EU). Marwo Rusmusen waxay bogaadin iyo mahadnaq balaadhan usoojeedisay jaaliyada Denmark sida wanaagsan eey jaaliyadu uga qayb qaadatay soodhawaynta wufuuda kasoo qaybgalay siminaarka, waxayna sikooban usoo bandhigtay baahida looqabo iskaashiga jaaliyadaha kaladuwan ee kahawlgala qaarada Yurub iyo siday isdhexgal (Integration) usamayn lahaayeen. waxaa kale oo isna khudbad aad uqiimo badan kasoo jeediyay Mr. Ayo Oluwadara, oo ah aqoonyahan kayimid wadanka UK.
Dhanka kale waxaa kahadlay munaasabadan Eng.Cali Biixi iyo Marwo. Fardawsa Cabdullahi Mukhtaar, oo kamid ah masuuliinta sarsare ee uruka Jaaliyada Somalida Ogadeniya & ururka OYSU-Denmark, waxayna sixirfadaysan usoobandhigeen waxqabadka ururka iyo siyaasada guud ee ururku higsanayo mustaqbalka danbe haduu Eebuhu yiraahdo.
Waxaa kaloo xaflad furitaanka maanta kahadlay Mudane Aziz Fall, oo ah khabiir ku xeeldheer arimaha xuquuqul insaanka oo kuhadlayay magaca hay’ada Xuquuqda Aadamaha (human right watch) ahna maareeyaha Xaga istiraatiijiga (Strategy Director).
Siminaarka oo jawi wanaagsan kubilaabmay maalintiisii koobaad ayaa waxaa lagu gurfeeyay arimo badan waxaana laga dooday oo la,iswaydaarsaday waxyaabo badan oo kusaabsan jaaliyadaha ay kasocdeen kaqayb galayaasha siminaarkan, wuxuuna socon doonaa haduu ilaahay yiraahdo siminaarku tan iyo 8 April 2012.